Soo -saaraha iyo Warshadda Cajaladda Copper -ka ugu Fiican | Civen
Cajalad-bireedka naxaasta ah oo keli ah ayaa loola jeedaa hal dhinac oo leh dusha sare ee aan dheef-qabadka lahayn, oo qaawan dhinaca kale, si ay koronto u qabato; sidaas darteed waxaa loogu yeeraa bireedka naxaasta ah ee hal dhinac leh.
Cajaladda bireedka naxaasta ah waxaa loo qaybin karaa hal iyo laba -bireed bireed:
Biraha naxaasta leh ee labada dhinac leh waxaa loola jeedaa bireedka naxaasta oo waliba leh dahaadhka dhejiska ah, laakiin dahaadhaas dhejiska ah ayaa sidoo kale tabin leh, markaa waxaa loogu yeeraa bireedka naxaasta leh ee labada dhinac leh.
Dhinac waa naxaas, dhinac kalena wuxuu leeyahay warqad dahaar leh. Bireed Copper leeyahay adhesion xoog leh iyo elongation. Waxaa inta badan sabab u ah sifooyinka korontada ee naxaas -ka -samaysan oo wanaagsan oo inta lagu guda jiro hawsha ay yeelan karto saamayn tabin oo wanaagsan; marka labaad, waxaan u isticmaalnaa nikkel dahaarka leh si aan u difaacno faragalinta elektromagnetic ee dusha bireedka naxaasta ah.
Waxaa loo adeegsan karaa noocyo kala duwan oo ah kuwa wax -beddelaya, taleefannada gacanta, kombiyuutarrada, PDA, PDP, kormeerayaasha LCD, kumbuyuutarrada buugaagta, daabacayaasha iyo alaabooyinka kale ee macmiilka ee gudaha.
Daahirsanaanta biraha naxaasta ahi waxay ka sarraysaa 99.95%, shaqadeedu waa inay baabi'iso faragelinta elektromagnetic (EMI), waxay ku dhejisaa mowjadaha elektromagnetic ee waxyeellada u leh jirka, waxay ka fogaataa faragalinta hadda aan la rabin iyo korantada.
Intaa waxaa dheer, kharashka korontada ku shaqeeya ayaa saldhig u noqon doona. si adag ugu xidhan, guryaha tabinta wanaagsan leh, waxaana loo jari karaa cabbirro kala duwan iyadoo loo eegayo shuruudaha macmiilka.
Shaxda 1: Astaamaha Fool -biraha
Heerka（Dhumucda Biraha Biraha）
0.018mm Hal dhinac ah
Aan Waxba Qaban
0.025mm Hal dhinac ah
Aan dhaqan lahayn
0.035mm Hal dhinac ah
0.050mm Hal dhinac ah
Xusuusin:1. waxaa loo isticmaali karaa wax ka hooseeya 100 ℃
2. Fidinta waxay ku dhowdahay 5%, laakiin waa la beddeli karaa si waafaqsan tilmaamaha macmiilka.
3. Waa in lagu kaydiyaa heerkulka qolka waxaana lagu kaydin karaa wax ka yar hal sano.
4. Marka la isticmaalayo, ka ilaali dhinaca dhejiska waxyaalaha aan la rabin, iskana ilaali isticmaalka soo noqnoqda.
Hore: Qurxinta Strip Copper
Xiga: NickelFoil oo ah Elektrolytic
Cajaladda Copper -ka Dabaysha
Cajalad -bireed Copper
Cajaladda Difaaca Copper
Cajalad -bireedka naxaasta ah ee dhuuban
3L Laminate Colad Copper debecsan